सीके राउत : एक विश्लेषण - Janakpur Today
यो लेख शुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रोचक प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु । एक जना मान्छे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कोठा अगाडी भन्न लाग्यो – ,,हजुर मलाई त बम चाहियो । प्रहरीले समातेर उसलाई अधिकारी समक्ष उपस्थित गराए । अधिकारीले भने कि तिमिलाई थाहा छैन , नेपालमा व्यतिmगत रुपमा बम राख्न कानुनले निषेध गरेको छ। अनि ती मान्छेले भन्यो –“हजुर मलाई त्यो कुरा राम्ररी छ । मलाई चाहिएको बम होइन । मलाई त शान्ति सुरक्षाको निम्ति बन्दूक चाहिन्छ ।तर मेरो एक जना छिमेकीले आउने बेलामा भन्यो कि यदि तिमीलाई बन्दूक चाहियो भने बम माग्नु , नत्र बन्दूक मागेपछि लठ्ठी दिन्छ नि त । त्यसै कारण बम भनेको हजुर मेरो केही दोष छैन . माफी पाउँ” ।
अहिलेको राजनीतिक परिपेक्षमा सिके राउत एउटा त्यस्तै पात्र हुन् । जसलाई के चाहिएको थियो र के माग्दै थियो । के चाहिन्छ त्यो कुरा अहिले पनि गर्भमै छ । तर उसलाई अब स्वतन्त्र मधेश राष्ट्र चाहिदैन भने कुरा प्रमाणित नै भएको छ २०७५ फागुन २४ गतेमा भएको एघार बँुदे सम्झौताबाट । त्यस सम्झौताबाट उहाँका समर्थकहरु पनि आश्र्चयचकित भएका छन् । आम मानिसलाई जवाफ दिन सकस भएको छ । सम्झौतापछि जनकपुरधाममा भएको प्रदर्शनमा उहाँका कार्यकर्ताहरुले खुलेआम फ्री मधेशको नारा लगाउँदा पनि उहाँले रोक्न सकनु भएन । सम्झौताको अर्थ कार्यकताले बुझदै बुझेन । सिके राउतको भनाइ र गराइमा आकाश र जमिको फरक भएको कुरा कार्यकर्ताहरुले अब सायद बुझलान कि ?
सिके राउतको आत्मकथा “वैरागदेखि वचाउसम्म “र वीर मधेशी” लगायतका पुस्तकहरु मैले पनि अध्ययन गरेको छु । उहाँले आफनो आत्मकथामा भन्न खोजनु भएको व्यथाहरु धेरै आम मधेशीहरुले काठमाडौमा भोगि रहेका थिए । लेखक पनि जब प्रथम पटक काठमाडौं पुगे । त्यहा पहाडी समुदाय पराया जस्तो र मधेशी समुदाय आफनो जस्तो अनुभव गरियो । जब कि पहाडी समुदायसँग मेरो कुने झगडा नै भएको थिएन, प्रत्यक्षरुपमा घुलमिल हुने मौका पनि मिलेको थिएन । गाउँमा रहँदा म जुन पार्टीको कट्टर समर्थक थिए । त्यतिवेला त्यै पार्टीको सरकार पनि थियो । तर मलाई त्यो सरकार आफनो जस्तो लागेन । यो समस्या खस समुदायले हामीमाथि थोपरेको मनोविज्ञान नै थियो । खस शोषक र हामी मधेशी शोषित हौं भने कुरो मधेशीको वंशानुगत गुण जस्तै नै भइसकेको छ । कारण हामी माथि शोषणको अवधि करीब अढाइ सय वर्ष पुग्दैछ । म आफनै गाउँका विपक्षी खस पार्टीका मान्छेलाई शत्रुको नजरले हेर्थे । उनी पनि मलाई शत्रुको नजरले नै हेर्थे । अनि जब म काठमाडौं पुगे एउटा नयाँ अनुभव गरियो कि तिमी पनि शोषित म पनि शोषित जसकारण मधेश आन्दोलन पश्चात मेरा गाउँका ८०% जनता खस पार्टी त्याग गरेर संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीमा (राजपा) प्रवेश गरेर मधेशीको हकहितमा नारा बुलन्द गर्दै छन् ।
आफ्ना साहित्य मार्फत सिके राउतले पहाडी समुदायप्रति फैलाएको भ्रम र धृणा मायामा परिवर्तन हुन केही समय अवश्य लाग्नेछ । नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संगै सहादत प्राप्त गरेका मधेशी पहाडी समुदायका वीरहरु मध्ये मधेशी शहीदको गुणगान र पहाडी शहीदको नामसम्म पनि स्मरण नगर्नु एउटा उदाहरण नै हुन् । सहादत दिने वेलामा हाम्रा वीर शहीदहरु नेपाली भएर नै शहीद भए । हो उनीहरु फरक फरक समुदाय, भाषा र संस्कृतिका अवश्य थिए । उहाँहरु समृद्व नेपालका खातिर नै ज्यानको आहुति दिए । जुन कुरा सिके राउत ११ बुँदे सम्झौता गरेर बुझेका छन । यही कुरो बुझन नपाउँदा सिके राउत ११ बुँदे सम्झौतामा शहीदको अवमृल्यन नै गरेका छन् । आफ्ना बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादबलाई शहीद घोषणाको सम्झौतामा उल्लेख गराउन नसकनु उहाँको ठूलो भुल हो । एकदिन मधेशी जनताले राममनोहर यादवको सहादतको हिसाब सिके राउतसँग माग्नेछ । जबकि सिके राउत सधैं भन्दै हुनुहुन्थ्यो( कि मधेश आन्दोलन गरेर के भयो ? मधेशीले के पायो ? शहीदको सहादत बेकार भयो । अब मधेशीको कल्याण स्वतन्त्र मधेशमा नै छ । मधेशी नेता चोर हो दलाल हो , गद्दार हो , विश्वासघाती हो । मधेशी विरोधी हुन् । यस सम्झौताबाट सिके राउतलाई मधेशी समुदायले वहाँलाई दलाल भन्लान कि , मधेश विरोधी भन्लान कि, खसका मतिकार भन्लान कि, यूरोपियन यूनियनका दूत भन्लान कि । आशा गरौं यस कुराको जवाफ समयले दिने नै छ । हाललाई बढी विश्लेषण नगर्नु नै उचित होला कि ?
अर्कोतिर सम्झौताबाट नेपालमा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली मुसो मारेको वीर जस्तै उफ्रीरहेका छन् ।एक बर्षदेखि प्रधानमन्त्री ओली दुई तिहाइको दम्भमा गुलछर्रा उडाउने काम बाहेक केही नगरेका र ओलीका मंत्रीहरु ठेक्कापट्टा,कमिशन र भ्रष्टाचारमा डुवेका कारण आलोचनावाट बच्न उसले सिके राउतको सम्झौतालाइ ठूलो उपलब्धि मानेर आपना संचार माध्यमहरुमा विज्ञापन गर्न व्यस्त छन् । मानौ यस सम्झौतावाट देशको कायापलट हुनेछ । मधेशी युवाको आकर्षण रोक्न नै सरकार रातारात सम्झौता गरेका हुन । जुन कुरा सायद सिके राउत वुझन सक्नु भएन ।गत आमचुनावमा मधेशी पार्टीप्रति मधेशी युवाको आकर्षण देखेर खस शासक डराएका थिए । आपना खस पार्टीका युवा पनि त्यतितिरै कही आर्कषित भएर पलायन भइजाला कि मनोविज्ञानवाट ओली ज्यादै नै त्रसित थिए । मधेशीलाई गाली गरेर केपी ओली पहाडी समुदायको मत पाउन सफल भएका थिए । जुन रणनिती सधै काम लाग्न सकदैन । खस पार्टीमा मधेशी समुदायको अब खासै आर्कषण छैन् । केही नेता पद ,प्रतीष्ठा र पैसाको निम्ति मात्र त्यस पार्टीमा वसिरहेका छन् । खस पार्टीमा बसेर मधेशी कहिले पनि अधिकार पाउन सक्दैन् । २००७ सालदेखि हालसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रमाणित भइसकेको छ ।
सिके राउतबाट सरकारलाई कुनै सुरक्षा खतरा थिएन । राउतको कार्यहरु शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक नै थियो । कही पनि बन्द, हडताल, तोडफोड भएको थिएन । सरकाले नै राउतलाई चर्चामा ल्याउने कोशिश बारम्वार गरिरहेको देखिन्यो । शान्तिपूर्णरुपमा आफनो कुरा राख्न नपाउने कुन लोकतान्धिक देशमा त्यस्तो कानून छ । यहाँ यस्तै भइरहयोे । सरकारले समात्ने र अदालतले छोडने जुहारी चलिरहयो । जुन नाटकको अब पटाक्षेप भएको खस शासकले बुझेका छन् भने त्यो उसको ठूलो भुल हो । जबसम्म मधेशी, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम समुदायले नेपालमा पूर्ण स्वायतता र आत्मनिर्णयको अधिकार पाउदैन । तबसम्म यस देशमा राष्ट्र विखण्डनको मुदा उठिरहनेछ । बेलैमा सचेत होऔं ।
जनकपुर टुडे २०७६ बैशाख ११ गते-PDF